Stacey Dash Oo Qaawan & Sawiro Wasmo iyo Sawiro Muuqaal Galmood ah - Diiwaanka Filimka Caanka Ah
Stacey Dash Oo Qaawan & Sawiro Wasmo iyo Sawiro Muuqaal Galmood ah
Fiiri mid ka mid ah atariishooyinka madow ee aan ugu jeclahay jirka kulul, iyo wejiga xun ee xun! Waa kan atariishada iyo qaabka Stacey Dash qaawan & sawiro aan culeys laheyn oo ay u sameysay Playboy iyo dameerkeeda qaawan iyo boobs ee goobaha galmada isku duba ridka aan soo aruuriney!
Stacey Dash (Da’deedu tahay 54 jir) waa atariisho Mareykan ah isla markaana martigalineysa barnaamijka hadal-haynta hore. Dash ayaa ku jilay Dionne Marie Davenport filimka ‘Clueless’ iyo taxanahiisa telefishanka oo isku magac ah. Waxay sidoo kale ka soo muuqatay filimada ‘Moving’, ‘Mo’ Money ’,‘ Renaissance Man ’, iyo‘ View from the Top ’. Shaqooyinka kale ee telefishanka waxaa ka mid ah muuqaallo taxane ah 'CSI: Baaritaanka Muuqaalka Dembiyada', 'Mudanayaal Hal Dumar ah' iyo barnaamijka dhabta ah ee TV-ga 'Celebrity Circus'. Waxay sidoo kale ka muuqatay fiidiyowyo muusig oo loogu talagalay Carl Thomas ''Qiiro' iyo Kanye West ‘S“ Dhammaan hoos baa u dhacaya ”. Marka iyadu ma fariisato, kor ayey u sii socotaa!
Naagtan caajisnimada ah waxaa la guursaday 4 jeer! Maxaa dhibic ah! Ninkeedii ugu horreeyay wuxuu ahaa Brian Lovell, waxay guursadeen 1999, laakiin waxay kala tageen dhawr sano kadib. Kadib way cajaa’ibaysay waxayna sidoo kale guursatay James Maby sanadkii 2005, waxayna sii socdeen sanad kaliya… Ninka xiga ee isku xigta wuxuu ahaa Emmanuel Xuereb waxayna wada joogeen dhowr sano. Hadda waxay guursatay Jeffrey Marty, oo aamin ama ha rumaysan, guurkani wuxuu soconayaa tan iyo 2018. Rajaynaynaa inay iyadana furi doonin, sababta oo ah qiimaha haweeney 54 jir ah ma weyna… Laakiin iyadu waa qof caan ah, waana taas wax weyn oo dhillo ahaansho!
Stacey Dash sawiro qaawan
Naag qurux badan! Ma garanayo inta lacag ah ee ay qaadatay si ay u sameyso sawirkan toogashada ah, laakiin waan ku faraxsanahay isla markaana ku faraxsanahay isla waqtigaas! Waa kan Stacey Dash oo qaawan sawirada ay u sameysay majaladda Playboy. Dhamaanteen waan ognahay waxa laga filayo, laakiin iyadu wax badan ayey na siisay! Stacy Dash digaagga iyo dameerkeeda waa kuwo la yaab leh laakiin ka daawo boobyadan dabiiciga ah iyo ibta adag ee ay jeceshahay inay na siiso! Just aad u jinsi ah subaxnimadan! Stacey Dash oo qaawan ayaa iga dhigtay inaan jeclaado iyada!
Stacey Dash oo qaawan & muuqaallo jinsi ah
Muuqaalka ugu qaawan ee Stacey Dash abid! Stacy Dash waxay galmo ku sameysay filimka ‘Sharci darrada buluuga ah’ waa kan! Waxay nuugaysaa farta nin marka hore. Ka dib isagoo ku ciyaaraya ibtaheeda adag ee farta ka hor intaanay galmo adag samayn. Waxaan arki karnaa Stacey Dash oo aan ciriiri lahayn, dameerkeeda qaawan, iyo dib ubax markale!
Waxaana jira laba muuqaal oo Stacey Dash ah oo ku cayaareysa xeeb been abuur ah. Waxay xidhataa dharka bikini ee casaanka ah inta lagu jiro muuqaalo dheeri ah oo dheeri ah oo laga helay dhamaadka filimka ‘Marnaba Ma Noqon Karo Haweeneyda’. Kadib Stacey Dash waxay kujirtaa dhar casaan adag oo aan bra lahayn. Ibtaheeda adag way garaacayaan, maadaama ay nin la sheekeysaneyso xoogaa ilaa uu ka dhunkado. Geedi socodka oo dhan waxaa daawaday kormeeraha Michelle Pfeiffer.
Dabcan mid kamid ah atirishooyinka caanka ah ee halkaan kasoo muuqday Dash, Michelle Pfeiffer waxay leedahay sawirro qaawan oo u gaar ah iyo isku dubarid muuqaallo galmo ah on Mostra Musa!
Isku soo wada duuboo muuqaalladaani waxay kaa dhigayaan cumbo, kaliya fiiri fiidiyowga oo ku raaxee!
Emma roberts qaawan cosmo
"Anya Taylor-farxad" qaawan
Emma Watson xiisaha qaawan cusub